Kalkaaliyayaasha oo ku gacan seyray amar ka soo baxay madaxweynaha dalka – The Voice of Northeastern Kenya
Kalkaaliyayaasha oo ku gacan seyray amar ka soo baxay madaxweynaha dalka
Kaddib amar shalay ka soo baxay madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta , xoghayaha guud ee ururka qaran ee kalkaaliyayaasha dalka ee KNUN Mr. Seth Panyako ayaa wacad ku maray inay sii soconayso shaqa joojinta ay ku guda jiraan.
Mr. Panyako ayaa ku doodaya in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid sharciga waafaqsan sidaasi awgeedna uunan jirin wax isbedel ah oo ku yimid.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in mas’uuliyiinta kalkaaliyayaasha ee ismaamulada kala duwan ay awood u leeyihiin in gadoodka shaqo la soo afjaro.
Sido kale waxaa uu intaasi ku daray inay u hoggaansamayaan sharciga oo aynan wax xadgudub ah sameynayn balse aynan dhanka kale marnaba ka gaabin doonin inay u doodaan xuquuqda shaqaalaha dowladda ee ay matalaan.
Waxaa uu ku nuuxnuuxsaday inuunan u jawaabeynin madaxweynaha dalka kaddib amarkii uu soo saaray balse uu xubnaha ururka KNUN ee ismaamulada qaar uu u xaqiijinayo inay sii wadi karaan shaqa joojintooda
Shalay ayay ahayd markii Hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta oo hadal kooban ka jeediyay madaxtooyada wadanka looga arrimiyo ee State House uu amarro adag ka soo saaray shaqa joojinta ay kalkaaliyayaasha ku guda jireen maalmihii la soo dhaafay.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Facebook-ga ayuu ku sheegay inuu amarkan ku dhawaaqay kaddib kulan uu la qaatay madaxda wasaaradda caafimaadka iyo golaha ay ku mideysanyihiin barasaabyada dalka ee COG.
Ilaa iyo hadda waxay shaqa joojinta kalkaaliyayaasha ka socotaa 13 maamul goboleed halka 10 kalena ay ku biirayaan isniinta sida Murang’a, Tana River, Nakuru, Siaya, Kakamega, Narok, Makueni, Bomet iyo Busia.
Maalmaha talaadada iyo arbacada ee isbuuca soo socdo kalkaaliyayaasha ka howlgalo isbitaalada dowladda ee ismaamulada Uasin Gishu iyo Isiolo ayaa la filaya inay dhigaan qalabka ay ku shaqeyaan.
← Kenyaanka oo walaac ka muujiyay isbedelka cimilada
Qoyska Caroline Mwatha oo doonaya in meydkeeda si madax bannaan loo baaro →